Ukuvulwa kweakhawunti engaselunxwemeni eSipro-Foster Swiss
Umda phesheya kolwandle
DSineenkonzo zokuvula iiakhawunti ezingaselunxwemeni eCyprus kunye neeakhawunti ezingaziwayo zebhanki ezinamakhadi okutsala imali eAsia, eMelika naseYurophu, ejolise kwiinkampani, abantu abathile nakwimibutho ephambili.
Ukuba ufuna i-akhawunti yabucala kwi-European Union ekhuselekileyo, engaziwayo kunye neendleko eziphantsi kulondolozo lwakho iakhawunti yebhanki engaphesheya, eyakho kunye neyakho inkampani, siyacebisa ECyprus.
Ubume obukhethekileyo kwi-European Union
I-hipre inesikhundla esikhethekileyo ngaphakathi kwe-European Union kwaye ithathwa njengendawo yerhafu yimithetho emininzi yaseYurophu. Uncedo lwe ECyprus Ilele kwinto yokuba iyinxalenye ye-European Union kwaye imali yaseburhulumenteni yi-euro, eyamkelwa ngomhla woku-1 kuJanuwari ka-2008. Iirhafu zeenkampani ezibhalisiweyo eSipro ziipesenti ezili-10, ngelixa umndilili waseYurophu umalunga nama-30%. Ke ngoko, le yeyona ndlela ingcono yerhafu yaseCyprus ebonelela iinkampani ngeendlela ezifanelekileyo zokunciphisa iirhafu ngelixa lifumana inani elisemthethweni le-VAT yaseYurophu ukuba lisebenze kulo naliphi na ilizwe le-EU.
I-hipre inemithetho engqongqo kakhulu kwi imfihlo yebhanki kwaye ibe lulawulo olukhethiweyo ukuba ube nalo ii-akhawunti zebhanki ezingaziwayo Zombini zobuqu kunye neenkampani. Ukungaziwa kwebhanki, kuyakuthi ngakumbi ukuba yabucala xa umthengi kunye nenkampani banokonwabela, iingcali zilumkisa ukuba ukuze kunyuswe umgangatho ngasese kunye neemfihlo zebhanki kucetyiswa ukuba kutshintshwe imali kwiibhanki ezahlukileyo kwaye isebenze neebhanki ezingaziwayo, njengoko oku kungabonyusa ubumfihlo kunye nokhuseleko lomthengi.
Kusemthethweni na ukuvula i-akhawunti yebhanki engaselunxwemeni eCyprus?
Ukuvula iakhawunti ye-offshore eSipro okanye kulo naliphi na elinye ilizwe okanye ulawulo olusezantsi lwerhafu isemthethweni. Okungekho mthethweni kukuba umzuzi wale akhawunti azise abasemagunyeni belizwe lakhe ngemvelaphi yokuvula iakhawunti yebhanki engaphesheya.
Kufuneka sikhumbule ukuba enye yeempawu eziphambili ze Imimandla engaselunxwemeni yiyo ngasese kunye nokungachazwanga kolwazi lwerhafu lwabaxumi bayo.
Izibonelelo zokuvula i-akhawunti yebhanki engaselunxwemeni eCyprus
Ezinye zeempawu zebhanki zaseCypriot zezi zilandelayo
Iindleko zolondolozo ezisezantsi kwiiakhawunti zexesha lethu kunye nezisisigxina ngokuthelekiswa nezinye iindawo ezifana neSwitzerland neLiechtenstein.
Ubuncinci bebhalansi yeakhawunti: i-100 yeeuros (kuxhomekeke kwibhanki ekhethiweyo).
Inkonzo yabathengi kwezi lwimi zilandelayo: isiNgesi, isiRashiya nesiGrike.
Umthengi uya kuba nakho ukuvula i-akhawunti yebhanki ngemali ayifunayo, ukuba nje yeyethenda yezomthetho yamazwe ngamazwe (i-euro, idola yaseMelika, idola yaseCanada, idola yaseOstreliya, iponti yaseBritane, yen yaseSwitzerland, njl. Njl.).
Ngexesha lenkqubo yokuvula i-akhawunti yebhanki, awuyi kufuna ubukho belizwe, zonke iinkqubo ziya kwenziwa nge-imeyile kunye / okanye nge-imeyile eqinisekisiweyo.
Iibhanki eziphambili ezingaselunxwemeni zisebenza eSipro
Ukuqinisekiswa kwempumelelo. Sibuze malunga neemfuno zakho. Singavula eyakho iAkhawunti yonxweme eseSipro ngaphandle kokufuna naluphi na uhlobo lokufuduswa okanye ukuphazamiseka kwicala lakho. Sisoloko sisebenza kwiibhanki ezingaphezulu kwe-25 kwihlabathi liphela, ezinoluhlu olungaphantsi kwe-EU kunye neMelika. Sinikezela iiakhawunti zebhanki engaphesheya kurhwebo lwe-elektroniki kunye ne-forex, ukusombulula ukuvulwa kweakhawunti e-Asiya, eMelika naseYurophu.